Manyowa akagadzirwa neminhenga yehuku | Green Renewables
Mamirioni matani e manhenga huku uye kabhoni dhayokisaidhi, chinokonzera kusagadzikana kwemamiriro ekunze, inoburitswa gore rega rega papasi. Kubatanidza izvo zviviri zvinobvumidza kuwana mhando nyowani ye fetiraiza nekutenda kune yakapusa kemikari maitiro, uye zvakare neyechipiri chigadzirwa iyo inogona kushandiswa seyakavhara mvura mumiriri.
Nyika ine huwandu hunofungidzirwa hwemamirioni e19.000 huku, iyo inopetwa kaviri nehafu kupfuura huwandu hwevanhu. Zve kudyiwa kwe shiri 5 mamirioni matani eminhenga anobuda gore rega. Vazhinji vanopedzisira vava kurodha pasi kwavanogara kwemakumi emakore.
Mushure mekushandurwa kuita mapurasitiki, muhydrogen-based peturu, mune zvinhu zvakaumbiridzwa, chingave chishandiso chitsva, chakagadzirwa ne change Chen kubva kuChina University of Science uye Technology muHefei, Anhui Province, kugadzira fetiraiza.
Kuora ne pyrolysis 1 g yeminhenga pa600 ° C kwemaawa matatu mu carbon dioxide, 3 g ye soda yekubikisa de ammonium. Ichi chigadzirwa chinogona kuzoshandiswa semanyowa. Kana yakatsamwa kusvika 60º C, inoburitsa ammonia, inoshandiswa se compost.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Ecology » Kurima kwezvakatipoteredza » Kompositi yakagadzirwa kubva kuminhenga yehuku
John Gunsha akadaro
Yakanaka chinyorwa paunogona kuwana rumwe ruzivo pane iyi nhaurwa
Pindura Juan Gunsha